दोस्रोपटक बिवाह गरेकी प्रियंकालाइ वाह वाहका साथै गा´लिको बर्षा, दुबैको यस्तो ह´र्कतले सबै फ्यान अ´चम्मित ! – Butwal Sandesh
दोस्रोपटक बिवाह गरेकी प्रियंकालाइ वाह वाहका साथै गा´लिको बर्षा, दुबैको यस्तो ह´र्कतले सबै फ्यान अ´चम्मित !
काठमाडौं । नेपाली सिने जगतका ‘हट केक’ मानिएका नायिका प्रियंका कार्की र नायक आयुष्मान देशराज जोशीले हालै धुमधामका साथ विवाह गरे । यहि फागुन १६ गते कानुनी र १७ गते परम्परागत रुपमा विवाह गरेका यी जोडीको प्रेम अफेयर्सका बारेमा खुबै चर्चा चलेको थियो । बिहे अगाडि ‘ब्याचलर पार्टी, मेहेन्दी र संगीत सेरेमोनी गरेर चर्चा बटुलेका यी जोडीका विवाह र पहिरनका बारेमा प्रशंसा र आलोचना पनि उत्तिकै चल्यो । प्रियंकाको यो भन्दा पहिले नै एउटा बिवाह असफल भएपछि उनले दोश्रो बिवाह गर्दै थिइन् । उनले कलाकारितामा जना चाहने र उनका पुर्व श्रीमानले कलाकारितामा रोक लगाएका कारण उनीहरुको सम्बन्ध टु´टेको थियो ।
प्रियंकाले इन्स्टाग्राममा पोष्ट गरेका तस्वीरहरुमा नेपाली मौलिक परम्पराभन्दा पनि भारतीय संस्कार झल्किएपछि उनका शुभेच्छुकहरुले गा’ली गरेका छन् । भारतीय संस्कारको नक्कल गरेको भन्दै उनीहरुमाथि ख´निएका शुभेच्छुकहरुका लागि प्रियंकाले प्रष्टीकरण नै दिनुपरेको छ ।
रविनाका पूर्व पति जोशी हुन् । आयुष्मानले बुवा र आमा दुवैको थर प्रयोग गर्दै देशराज जोशी श्रेष्ठ लेख्ने गरेका थिए । अब श्रीमतीको थरलाई पनि आफ्नो नाममा समेट्दा उनको नाम पछाडि छर थर जोडिएको हो ।